Shiinaha Difaaca-Slip-ka Dayactirka Qoryaha Isugeynta WPC Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Lihua
3D lagu sharraxay Decking
Xirxirida gidaarka caadiga ah
3D Isku-duuban Gidaarka Gidaarka
Isku-xidhka Darbiga Isku-xidhka
Taxanaha Beerta WPC
Guddiyada Bench Bench
WPC Ubaxa Weelka
Ka-hortagga-xajinta Ka-hortagga Qoryaha Dayactirka Hoose ee WPC Decking
Lahaanshaha alaabada: WPC Decking
Shayga No: LH146H23A
Lacag bixinta: TT / LC
Qiimo: $ 2.27 / M
Asalka alaabta: Shiinaha
Midab: Midabka qoryaha, Kafee, Teak, OAK, Walnut, iwm
Dekedda Maraakiibta: Dekedda Shanghai
Waqtiga hogaaminta: 10-15 MAALMOOD
WPC Decking Dibadda
2620g / m
2.7m 2.9m ama loo habeeyay
Beerta, Beerta, iwm
PC Waxyaabaha muhiimka ah ee loo yaqaan 'WPC decking' waa PE, fiilooyinka alwaaxa iyo waxyaabo lagu daro.
Qalabkayagu WPC waa qurux iyo xarrago dabiici ah uumiga qoryaha, taabashada si sahlan loo rakibo, sidaas awgeed wuxuu la kulmi karaa shuruudaha kala duwan ee macaamiisha.Waa la xiirayaa, la qodbi karaa, la qali karaa oo la jari karaa si ay ugu haboonaato qalabyo kala duwan, sida muuqaalka, beerta bannaanka, baarkinka, supermarket, iwm.
De Qurxintayada 'WPC' waa mid ku habboon deegaanka, oo aan dib loo cusbooneysiin karin isla markaana aan lahayn kiimiko kale oo qatar ah, uma baahna rinjiyeyn, koolo la'aan iyo dayactir hooseeya.
De Decking-keena wuxuu leeyahay awood cimilo wanaagsan, wuxuu ku haboonaan karaa laga bilaabo -40 ℃ ilaa + 60 ℃ .Dhirkeena WPC waxaa loo adeegsan karaa aduunka oo dhan.Boqoshooyinkayagu waa kuwo cimilada u adkaysta, warqad diidaya, dildilaacyo yar yar, xoqan, kabo saaxiibtinimo leh Ku darista UV .Plus waxay ka dhigtaa looxyada UV iska caabinta, libdha adkaysiga iyo adkeysiga cabirka diiran ee ka dhanka ah qoyaanka iyo heerkulka.
SOO SAARKA SOO SAARKA
Sibidhka iska caabinta qalalan
EN 15534-1: 2014 Qaybta6.4.2 CEN / TS 15676: 2007 EN 15534-4: 2014 Qaybta 4.4
Qiimaha qallooca ≥ 36
Jihada Longtitudinal: Ujeedka 72, Min 70 Jihada jiifka ah: Ujeedka 79, Min 78
Qolof Resistance qoyan
Jihada Longtitudinal: Micnaheedu waa 46, Min 44 Jihada jiifka ah: Ujeedka 55, Min 53
Diidmada caabbinta saameynta badan
EN 15534-1: 2014 Qaybta7.1.2.1 EN 15534-4: 2014 Qaybta 4.5.1
Qiyaasta midkoodna waa mid aan ku fashilmin dherer dillaac ah ≥
10mm ama qoto dheer dheel dheel sii hadhsan≥0.5mm
Dhererka Max.Crack (mm): No crack Max. Indenation dib u dhac ah (mm): 0.31
EN15534-1: 2014 AnnexA EN 15534-4: 2014 Qaybta 4.5.2
-Beegida hoos xamuul ah 500N Mean≤2.0mm, Max≤2.5mm
Awoodda Laabista: 27.4 MPa Modulus of elasiticity: 3969 MPa Xamuulka ugu badan: Ula jeedka 3786N, Min 3540N Leexashada 500N: Micnaha: 0.86mm, Max: 0.99mm
EN 15534-1: Qaybta 20147.4.1 EN 15534-4: 2014 Qaybta 4.5.3
Taako caan ku ah isticmaalka: Micnaha MeanS≤10mm, Max ∆S≤13mm, Micnaha MeanSr≤5mm
Xawaare: 330mm, Micnaheedu ∆S 1.65mm, Max ∆S 1.72mm, Micnaheedu ∆Sr 1.27mm
Barar iyo nuugista biyaha
EN 15534-1: 2014 Qaybta8.3.1 EN 15534-4: 2014 Qaybta 4.5.5
Barar Baaxad leh: ≤4% oo dhumucdiisuna tahay, -0.8% oo ballac ah, -0.4% oo dherer ah Max0.4% dhererkeedu Badan yahay: ≤5% oo dhumucdiisuna tahay, ≤1.2% oo ballac ah, -0.6% oo dherer ah nuugista Biyaha: Macnaheedu waa: -7%, Max : ≤9%
Barar Baadhitaan: 1.81% dhumuc ahaan, 0.22% ballac ahaan, 0.36% dherer Max Barar: 2.36% dhumuc ahaan, 0.23% ballac, 0.44% dherer dhuuqis biyo: Micnaheedu: 4.32%, Max: 5.06%
EN 15534-1: 2014 Qaybta8.3.3 EN 15534-4: 2014 Qaybta 4.5.5
Nuugista biyaha ee miisaanka: Mean≤7%, Max≤9%
Nuugista biyaha ee miisaanka: Waxaa loola jeedaa: 3.06%, Max: 3.34%
Isugeyn balaadhinta kuleylka toosan
EN 15534-1: 2014 Qaybta9.2 EN 15534-4: 2014 Qaybta 4.5.6 ISO 11359-2: 1999
U adkaysiga indentation
EN 15534-1: 2014 Qaybta7.5 EN 15534-4: 2014 Qaybta 4.5.7
Adag Brinell: 79 MPa Heerka soo kabashada laastikada: 65%
Dib u noqoshada kuleylka
EN 15534-1: 2014 Qaybta9.3 EN 15534-4: 2014 Qaybta 4.5.7 EN 479: 2018
Heerkulka Imtixaanka: 100 ℃ Macnaheedu: 0.09%
Hore: Si fudud u rakibo Qoryaha Caaga ah ee WPC Decking
Xiga: Bannaanka-ka-daxalka WPC Hollow Decking
Tilmaamaha Rakibaadda Guddiyada
Iyada oo la rakibo oo si habboon loo daryeelo, alaabada alwaaxda ayaa loo dammaanad qaaday inay bixiyaan sannado ku raaxeysiga dibadda. Si loo gaaro rakibo dhib la'aan ah alaabada alwaax:
-Ka tasho xeerarka dhismaha ee maxalliga ah ka hor rakibidda.
-Familiari naftaada tilmaamaha rakibaadda.
- Hubso inaad haysato dhammaan aaladaha iyo agabyada loo baahan yahay - sida ku qoran xaashida tilmaanta.
Kaydinta iyo Qabashada
- Weligaa ha kudaadin walxaha alwaaxda ah markaad dejineyso.
-Ku kaydi dusha sare oo ku dabool waxyaabo aan translucent ahayn.
- Markaad siddo looxyo, ku qaado dhinaca si aad taageero fiican u hesho.
-Xusuusin tilmaamaha rakibida tilmaamaha dheeraadka ah ee shey kasta.
Tilmaamaha Daryeelka iyo Qabashada
Si loo yareeyo xagashada, niikooyinka, jeexitaanka iyo jeexjeexyada, loona ilaaliyo quruxda qoryaha. Raac tilmaamahan:
-Ha is dul-qaadin sagxad is-dul-qaad ah marka aad guureyso. Markii aad ka saareyso cutubka, kor u qaad buundooyinka oo hoos dhig.
-Ha ku dhajin qalab ama ha ku jiidan qalabka sare dusha sare inta lagu gudajiro dhismaha.
-Ka ilaali dusha sare dusha sare qashinka dhismaha.Raadinta wasakhda iyo burburka dhismaha guud ahaan dusha sare, taas oo gacan ka geysaneysa xoqitaanka dusha sare.
Xog Muhiim ah
- Markaad la shaqeyneyso alaabada alwaaxda ah ama wixii qalab dhisme ah, hubi inaad xirato dhar habboon iyo qalabka badbaadada.
-Dhammaan alaabooyinka alwaaxda, qalabka shaqada alwaaxda caadiga ah ayaa loo isticmaali karaa, sida ku cad tilmaamaha soo-saaraha.
-Baashiishka waxaa lagu tuuri karaa qashin dhisme caadi ah.
-wuxuu leeyahay caabbinta sibidh fiican ee qoyan ama qalalan.
-wood wuxuu leeyahay nidaam xiraha qarsoon ee qarsoon waana fududahay in la rakibo boodhadhka alwaaxa.
-U adeegso ugu yaraan # 8 x 2-1 / 2 ”tayo sare leh oo dahaadhan, bir bir ah ama shaashad isku dhafan oo isku dhafan.
-Pre-qodista waxaa loo baahan yahay xilliga qabow iyo markay tahay 1-1 / 2 ”dhamaadka dhamaadka sagxadda
- Ha u isticmaalin xabagta ama xarkaha dhajiska alwaaxda ama isku xir xirmooyinka u dhexeeya labada deked iyo wixii kale. Tani waxay hor istaagi doontaa ballaarinta dabiiciga ah iyo foosha looxyada waxayna caqabad ku noqon doontaa dheecaanka qashinka.
Hawo sax ah ayaa loo baahan yahay
- Si loo yareeyo qoyaanka ka soo baxa hoosta sagxadda ， waa inuu jiraa ugu yaraan
of 12 ”hawada joogtada ah ee aan xaddidnayn oo saaran saddexda dhinac ee sagxadda si loogu oggolaado hawo gudub.
Tani waa inay ku yaalliin wax ka hooseeya salka hoose ee dusha sare.
-Barnaamijyada xaddidan qaarkood, oo ay ku jiraan dabaqyada laga dhisay geeska gudahiisa, hawo dheeraad ah ayaa loo baahan doonaa halka sagxadda ay ku kulmaan dhismaha. Ka gaabinta bixinta hawo ku filan waxay sababi kartaa fashil ku yimaada sagxadda dusha sare waxayna baabi'in doontaa dammaanadda.
Tilmaamaha Rakibaadda Lisen Wood decking
Waad badbaadin kartaa waqtiga dhismaha iyo kharashyada adoo sameysanaya naqshad, qorsheynaya inaad miisaaniyad u yeelatid alaabada lagama maarmaanka ah iyadoo loo eegayo ujeeddada barnaamijka. Waxaad ku dooran kartaa maadadaada sida aad rabto iyada oo leh noocyo badan oo ikhtiyaari ah, dhismaha alwaax, mashiinada alwaaxa loo isticmaali karo goynta, goynta, qodista iwm
Markaad rakibineyso sharraxaadda, marka hore waa inaad sameysid daaweyn qallafsan oo dhulka ka mid ah, ka dibna ku hagaaji jaaniska dhulka adag. Waxaan kugula talineynaa joornaalka 35-40cm. Kala dheereynta Joist sidoo kale waa la gaabin karaa sida la codsaday.
Tixgeli masaafad 3cm u jirta dhismaha markaad rakibineyso dharka.
Qalabka wadajirka ah ee alwaaxda lagu xirayo ayaa ah birta birta ah ee birta ka sameysan. Qoditaanku waa inuu ka yaraadaa dhexroorka dhexroorka fur ee 3/4 si loo kordhiyo is-qabashada boolal qabashada ee ciddiyaha.
Si tartiib ah u garaac decking adigoo adeegsanaya dubbare caag ah inta lagu guda jiro dhismaha si aad u hubiso farqiga u dhexeeya iyo dusha dhismaha qurxoon.
Dhererka biraha birta ah ayaa la saameyn doonaa sababtoo ah aagga dhismaha oo weyn. Waxaan kugula talineynaa qeybta 5mm kala-goynta markii loo baahdo qaybta isweydaarsiga.
1.Waad ku xidhi kartaa jeexitaanka iyo jooniska leh boolal is-taabanaya haddii goosgoosyada aan la heli karin isku xidhka qafiska iyo gogosha.
Xullo guddi dhammaystiran si aad u noqotid guddiga geeska iyadoo loo eegayo cabbirka dhexda iyo gogosha markaad dhammayso dhismaha ka dib.
Markaad rakibineyso sharraxaadda, marka hore waa inaad sameysid daaweyn qallafsan oo dhulka ka mid ah, ka dibna ku hagaaji jaaniska dhulka adag. Waxaan kugula talineynaa joornaalka 35-40 cm. Kala dheereynta Joist sidoo kale waa la gaabin karaa sida la codsaday.
Tixgeli 3cm inta u dhexeysa dhismaha marka aad rakibineyso dharka.
Qalab kale oo isku dhafan oo ah alwaaxda deyrku waa boolisyo bir bir ah ka sameysan. Qoditaanku waa inuu ka yaraadaa dhexroorka dhexroorka fur ee 3/4 si loo kordhiyo is-qabashada boolal qabashada ee ciddiyaha.
Waad isku xidhi kartaa jeexitaanka iyo joornaalka iyada oo boolal is-taabasho ah haddii clips-yada aan laga heli karin isku xidhka xargaha iyo gogosha.
Ku rakib decking adag
Tixgeli 3cm inta udhaxeysa dhismaha markaad rakibineyso decking adag Ku rakib decking adag ciddiyaha muuqda isla markaana dhig cidiyaha 2cm cirifka.
Ku celi hawsha.
Ka-hortagga warqadda WPC decking
decking isku dhafan
Bannaanka WPC decking
WPC guddiga decking
WPC qurxinta dibadda
Bannaanka Alwaaxda Biyuhu ka Dheehan Yihiin
Si fudud u rakibo Qoryaha Caaga ah ee WPC Decking
Iska caabin Weather Bannaanka Isugeynta WPC H ...
Bannaanka-ka-daxalka WPC Hollow Decking
Dayactirka Low Anti-sibiibixiinta WPC Hollow Decking Ex ...
Nolol Dheer Dib-u-warshadaynta Debedda Alwaaxda Dibedda ah
No.46 ee wadada baishijian,
aagga warshadaha langxi,
Email: alice@lisenwpc.com Tel: 0086-0563-3830116 Moobayl: 0086-13635632626
Waxaa loo heli karaa WhatsApp iyo Wechat
Right Xuquuqda daabacaadda - 2021-2025: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.
Qurxinta banaanka ee WPC, alwaax decking isku dhafan, Gogosha WPC, Dabaqa WPC, Qurxinta WPC, Bannaanka WPC decking,